भदौदेखि पोखराका सार्वजनिक बसमा ‘ई–टिकेटिङ’ लागू हुँदै
साउन २०, चिप्लेढुंगा(पोखरा) । पोखरा महानगरपालिकाले भदौ १ गतेदेखि पोखराभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक बसमा ‘ई–टिकेटिङ’ लागू गर्ने र त्यसलाई क्रमशः ‘कार्ड सिस्टम’ मा लैजाने भएको छ । महानगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले सो कुराको जानकारी दिँदै यहाँका यातायात सेवालाई व्यवस्थापन ग...
पहिरोमा पुरिएर ३ जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते
बागलुङ, २० साउन (अस) । बागलुङको तमानखोला–४ लाम्मेलामा आएको पहिरोमा पुरिएर ३ जनाको मृत्यु भएको छ । आइतवार रातिदेखिको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले ५ घर पुरिदा स्थानीय ४५ वर्षीया पञ्चकुमारी श्रीपाली, ७० वर्षीया असारी श्रीपाली र १२ वर्षीय प्रविण श्रीपालीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङक...
पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै बागलुङ कालिका मन्दिर परिसरका वन्यजन्तु
अर्जुन कार्की बागलुङ, १९ साउन । प्रसिद्ध बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा अहिले कालिजहरुले चारो खाँदै गरेका दृश्य देखिन थालेको छ । यस मन्दिर परिसरमा अहिले कालिजका साथै मृग, लोखर्के, बाँदर, खरायो, लाटोकोसेरो, कोइरल लगायतका वन्यजन्तुहरु खेलिरहेको, दौडिरहेको पनि देखिन थालेको छ । मन्दिर परिसरमा...
पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडको व्यवसाय विवाद अदालतमा
साउन १८, पोखरा । पर्यटकीय शहर पोखराको लेकसाइड चौविसै घण्टा खुलाउन रेष्टुराँ एन्ड बार एशोसिएशन अफ नेपाल (रेबान) पोखराले पहल थालिरहँदा होटल संघ भने यसको विपक्षमा उभिएको छ । लेकसाइडका स्थानीय आमा समूह, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रलगायत होटल व्यवसायीनै साँझको नौ बजेपछि सञ्चालन हुने डान्स बार, क्याबि...
सवारी कारबाहीबाट ५७ लाख राजस्व संकलन
बागलुङ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, बागलुङले गत आवमा ५७ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका ९ हजार ४४५ सवारीसाधनको कारबाहीबाट रू. ५७ लाख १५ हजार राजस्व संकलन भएको कार्यालयका प्रहरी नायव निरीक्षक महेन्द्र रानाभाटले जानकारी दिए । कार्यालयले गत आवको असार महीनामा सबैभन्दा बढी...
राजकुतको एनसेल टावरमा आगजनी
बागलुङ । बागलुङको राजकुतमा रहेको एनसेल टावरमा आगजनी भएको छ । बुधवार राति निसीखोला गाउँपालिका–७, राजकुतमा रहेको एनसेल टावरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका डीएसपी झविन्द्रप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आगजनीले टावर र सेटिङ बक्समा क्षति भएको उनले बताए । उनका अ...
पाल्पाका कृषकद्वारा समूहमा टिमुर खेती
साउन १६ बेझाड(पाल्पा) । जडीबुटीभित्र पर्ने टिमुर खेती पाल्पाबाटै हराउन थालेपछि संरक्षणका लागि पकेट क्षेत्रका रुपमा विस्तार गरिन थालिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले तीन ओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी व्यावसायिक रुपमा टिमुर खेती शुरु गरेको छ । निस्दी गाउँपालिकाको अर्चले, रिब्दिकोट गाउँपालिकाको ठ...
ट्राफिक प्रहरी कास्कीद्वारा ४ करोड ४७ लाख राजस्व संकलन
साउन १६, कास्की । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले गत आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा रू.४ करोड ४७ लाख ३७ हजार ५०० राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय कास्कीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब निरिक्षक जितजंग कार्कीका अनुसार सवारी नियम विपरित चलाइएका ६४ हजार २०० सवा...
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा : कार्यक्षेत्र घटेसँगै राजस्व संकलनमा कमी
कास्की । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखराको कार्यक्षेत्र घटेपछि राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको छ । गण्डकी प्रदेशका १० जिल्ला हेर्दै आएको कार्यालयको कार्यक्षेत्र गत आवदेखि कास्की र स्याङ्जामात्र कायम गरिएपछि राजस्व संकलन घटेको हो । गत आवमा कार्यालयले रू. ५ अर्ब २९ करोड ६९ लाख ६५ हजार राजस्व संकलन गरेको छ...
अलैंची आम्दानीको स्रोत बन्दै, ७ लाख बिरुवा विक्री
साउन १४, लमजुङ । यहाँका अलैंची कृषकले ७ लाख अलैंचीका बिरुवा विक्री गरेका छन् । लमजुङभित्र र बाहिरी जिल्लाका किसानलाई उक्त संख्याको बिरुवा विक्री गरिएको नेपाल अलैंची व्यावसायी महासंघ जिल्ला शाखाले बताएको छ । बिरुवा विक्रीबाट रू. ३५ लाख आम्दानी भएको उक्त शाखाका अजय तामाङले बताए । उनका अनुसार जिल्ला...
औषधि व्यवसायी संघमा घिमिरे
महिला उद्यमी मेला सम्पन्न